အာဟာရပြည့်ဝစွာမစားတဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေရဲ့ နို့ရည်ဟာ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ပါရဲ့လား? – BurmeseHearts
အာဟာရပြည့်ဝစွာမစားတဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေရဲ့ နို့ရည်ဟာ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ပါရဲ့လား?
မီးနေသည်တွေကို ဘာကြောင့် ထမင်းဆီဆမ်း ၊ ဟင်းခါး ၊ ငါးခြောက်ဖုတ်ပဲ ကျွေးကြတာလဲ?